NUG အတွက် နယူးယောက် မြန်မာရန်ပုံငွေပွဲ ဒေါ်လာ လေးသောင်းကျော်ရရှိ – Buanchukcho
■ မြန်မာပြည်ကိုလှူဒါန်းဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရောက် မြန်မာတွေစုပေါင်းကျင်းပတဲ့ ရန်ပုံငွေ စျေးရောင်းပွဲကနေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးသောင်းကျော် (မြန်မာငွေကျပ် သိန်းခုနှစ်ရာနီးပါး) ရရှိခဲ့တယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဒီငွေတွေကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် အဓိက လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပြီး အရပ်ဖက် ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလည်း လှူဒါန်းဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’ ကျနော်တို့ လာမယ့်သီတင်းပတ်ထဲမှာ ဒီငွေတွေ လှူနိုင်ဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ဦးဆောင်တဲ့ NUG ရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးတွေအတွက် အဓိကလှူမှာပါ။ တခြား အကူအညီတွေ လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုလည်း လှူဖို့ရှိပါတယ်။ စျေးရောင်းပွဲက လက်ရှိဒေါ်လာ လေးသောင်းကျော်ရထားပါတယ်။ go fund me တို့လို ဂရုတွေကနေ ကျနော်တို့စီအလှူငွေတွေလည်း ထပ်ရောက်လာနေသေးတာမို့ လေးသောင်းကျော်ထက်ကိုနိုင်ပါတယ်’’ လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်စွာအောင်က ပြောပါတယ်။
ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က နယူးယောက်မြို့ မြန်မာတွေအနေများတဲ့ Queen အရပ်မှာ ရန်ပုံငွေပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီပွဲကို မြန်မာပြည်အရေး လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ NHFMM အဖွဲ့ကနေ ဦးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေ စျေးရောင်းပွဲမှာ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၄၀ ကျော်ပါဝင်ကာ မြန်မာအစားအစာတွေ၊ နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ ဒေသခံခုခံကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ PDF ကို ထောက်ခံတဲ့ အကျ်ီတွေ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာတွေသာမက အမေရိကန်တွေလည်း စျေးရောင်းပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက် မြန်မာတွေဟာ အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ တိုးသထက်တိုး လုပ်ဆောင်လာစေဖို့ မြို့ကြီးတွေမှာ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြပွဲတွေ သီတင်းပတ်တိုင်းလုပ်နေကြသလို တစ်ဘက်မှာလည်း NUG နဲ့ PDF ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ စျေးရောင်းပွဲတွေ မကြာခဏ လုပ်နေပါတယ်။
ရန်ပုံငွေ စျေးရောင်းပွဲမှာ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၄၀ ကျော်ပါဝင်ကာ မြန်မာအစားအစာတွေ၊ နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ ဒေသခံခုခံကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ PDF ကို ထောက်ခံတဲ့ အက်ျီတွေ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာတွေသာမက အမေရိကန်တွေလည်း စျေးရောင်းပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Photo – Wayne Chit
Khrih ah dawtmi u le nau hna kan Bawipa Jesuh Khrih nih cun, “Minung hi rawl lawnginanung kho lo, sihmanhsehlaw Pathian nihachimmi bia paoh cuanunnakasi lai,” tiaharak ti. ( Mathai4:4). Cu bantukin nitin kan nunnak nih hin hnangamnak le lawmhnak taktakahnuh khawhnak ding caah tiin Pathian bia lawnglawng hi aa nunpi zungzalmi si ko hna u sih ti zong ka duh..